Kwinqwelo yakho yokuthengela - Make.id
Le ncwadi ilandelayo ichaza imiqathango yokusetyenziswa kwewebhusayithi ye-ID. Ngaphambi kokusebenzisa nayiphi na inkonzo ye-ID, kufuneka ufunde, uqonde, kwaye uyavumelana nale migomo.
(2) Ubunini beemakhadi ezinobungqina bungavunyelwa okanye abukho mthethweni kwezinye iindawo. Kuxanduva lomxhasi ukuqinisekisa ukuba ilifa lala makhadi liyavunyelwa kwindawo efunwayo ngaphambi kokuthenga ikhadi kunye nathi. Ngokuthengwa kwamakhadi ethu amnandi umthengi uqinisekisa ukuba ilifa leli khadi livumelekile kwimeko ehambelana nayo, isixeko okanye ilizwe.
(2) Ngokuthumela idatha yedatha ekupheleni komyalelo wokumisela umthengi ubeka umyalelo wokubopha izinto ngaphakathi kwinqwelo yokuthenga yezityalo. I-MAKE.ID iya kuqinisekisa ukuba ifumene umyalelo ngokukhawuleza. Okuqinisekisiweyo kokufumana akubanga ukwamkelwa komyalelo; nangona kunjalo ingaqhagamshelaniswa nesibhengezo sokwamkela.
(3) UMAKE.ID unelungelo lokufumana isibonelelo semvumelwano (umyalelo) womthengi kwisithuba seentsuku ezisixhenxe zokusebenza ezifunyenweyo. Ukwamukelwa kunokubhengezwa okanye ngoqhagamshelwano olucacileyo okanye ukuhanjiswa kweempahla.
(4) UMAKE.ID unelungelo lokunciphisa umyalelo kwixabiso lemali. Ukongezelela, utshintsho olunokwenzeka, olunjengomxholo, ifom okanye umbala - kwinqanaba elifanelekileyo kumthengi - ligcinwe.
(5) Inkontileka yokugqibela ixhomekeke ekuhambisweni okungekho okanye okukhethiweyo, kwimeko yokungalunganga okanye ukungafanelekanga ukunikezelwa ngabathengisi - oko kukuthi, i-MAKEID ayifuni nengozi. Uxanduva lweenjongo kunye nokunganakwa ngokuhambelana ne-§ 9 yale Migqaliselo neMibandela iya kuhlala ingakhuselekanga. Xa kwenzeka ukungabikho okanye ukutholakala ngokweenxenye zeeNkonzo ze-MAKE.ID ziya kuzisa ngokukhawuleza umthengi; xa kwenzeka ukurhoxiswa ngumthengi, i-already made payment iya kubuyiselwa ngokukhawuleza, ukuba inkonzo ayizange iqalwe okwamanje.
(2) Umthengi uya kuba nelungelo lokucima, ukuba ukuchaswa kwakhe okusemthethweni kuye kwasungulwa ngokomthetho okanye kwamkelwa yi-MAKEID. Umxhasi unokwenza kuphela amalungelo akhe okugcina ukuba i-counterlaimer isekelwe kwikontrakthi enye.
(1) Kubathengi, i-MAKE.ID igcina ubunini beempahla ezithengisiwe (iimpahla ezinemiqathango) kuze kube yintlawulo epheleleyo yentengo yentengo eyenziwe. Kwiimashishini, i-MAKE.ID igxininise ukuhlawulwa ngokupheleleyo kwezibango ezivela kwintsebenziswano eqhubekayo yezoshishino.
(4) Ngokwephulo lwekhontrakthi ngumthengi - ngokukodwa ukungahlawulwanga okanye xa kwenzeka ukuphulwa komsebenzi phantsi komhlathi (2) kunye (3) yalolu lungiselelo - IMAKE.ID inelungelo lokukhansela isivumelwano kunye nokubuyisela iimpahla.
(2) Ngokuhambelana nemimiselo esemthethweni, umthengi unokufuna nje ukuzaliseka ngokulandelelweyo ukuba iimpahla ezithunyelweyo ziyilo. Umthengi unokukhetha ukuba ngaba ukuzaliseka okulandelayo kuya kwenziwa ngokulungiswa okanye ukutshintshwa. Nangona kunjalo, i-MAKEID ihlala inelungelo lokunqanda uhlobo lokuzaliseka xa liza neendleko ezingafaniyo ngelixa olunye uhlobo lwesilungiso alukho naziphi na izinto ezingalunganga kumthengi.
(5) Ixesha lokukhawulelwa kwamalungelo omthengi ngenxa yeempembelelo zeempahla ezithengiweyo ziyiminyaka emibini ukusuka ekunikezweni kwempahla yabathengi kunye namashishini omnye kunyaka ukususela ngomhla wokuhanjiswa. Ukunciphisa ukulungelelaniswa kwezi zinto kufikelelekanga ngaphandle kokuba i-MAKEID ihlawulwe phantsi kweCandelo 9 yale Migqaliselo okanye ibhekisela kwilungelo lokwenene lomntu wesithathu, ngenxa yokunikezelwa kokunikezelwa kwempahla.
(1) Ngenxa yeemfuno zomthetho i-MAKE.ID inoxanduva ngokupheleleyo lokonzakalisa okubangelwe kukwenzakala ebomini, ilungu lomzimba okanye impilo esekwe kukwaphula umthetho ngabom okanye ngokungakhathali ngabo, abameli bayo bezomthetho okanye abancedisi bayo kunye neminye imonakalo, esekwe ngenjongo okanye ukwaphula umthetho ngokungakhathali. Ngapha koko iMAKE.ID inoxanduva ngokupheleleyo lokonakaliswa okugutyungelwe luxanduva ngokwezinto ezisemthethweni ezibophelelayo, ezinje ngeJamani Product Product Liability Act.
(2) I-MAKE.ID inesibophezelo somonakalo obangelwa ukunganakwa okulula, ngokungakhathaliseki ukuba ukunganakwa kubandakanyeka ukuphulwa kwemigaqo-mboleko, apho ukuzaliseka kwenkontileka kubaluleke kakhulu (izibophelelo zekhadi); ngelixa u-xanduva lukhawulelwe kwizinto ezibonakalayo, eziqhelekileyo, umonakalo othe ngqo.
(3) Xa kwenzeka ukuphulwa kancinci kwamanyathelo amancinci amakhontrakthi MAKEID akayi kuba noxanduva kumashishini; kubathengi, uxanduva kula maxesha lucaciswe kwizinto ezibonakalayo, eziqhelekileyo, umonakalo othe ngqo.
Le Migangatho yeNkonzo isebenza ngo-Agasti 01, 2016.
© 2022, Yenza.id | Studio Design Studio | iibheji | Cards Fun